कीतिमार्नी क्रिकेटर :: Press Chautari ::
गएको साता संसार र सञ्चार दुवै नेपालमय बन्यो । बिश्वमै फरक षडकोण आकारको नेपाली झण्डा बिश्व सञ्चार जगतमा चर्चाको बिषय भयो । राजनीतिक दल र तिनकै नेताहरुको समाचार र तस्बिर छाप्ने प्रमुख नेपाली आम-सञ्चारहरुमा पनि त्यहि समाचारले ब्रेकिङ्ग र ब्यानर न्यूजको थान पाए । जो अरु बेला पत्रिकाको कुनो र समाचारको पुच्छरमा कुनै “फिलर कन्टेन्ट”को रुपमा स्थान पाउँथे । यसपाली त यसो भएन । पत्रिकाहरुमा बोल्ड (मोटो) अक्षरहरुसँगै ठुल्ठूला तस्बिरहरु छापिए । टेलिभिजनका पर्दामा नयाँ ग्राफिक र एनिमेसनसहितको 'ब्रेकिङ्ग न्यूज' बजे । र बजे रेडियोहरुमा लगातार -
“नेपालको शानदार जीत...।”
सन्दर्भ त्यहि हो । बंगालादेशमा जारी ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको शानदार प्रर्दशन । जहाँ नेपाल देश र नेपाली जातिलाई संसारभरका करोडौ जनले एकै चोटी चिन्न पाए । जान्न पाए । जहाँ नेपाली टिमले क्रिकेटको विश्वयात्रामा बिजय यात्रा आरम्भ गर्दै थियो । फहराउँदै थियो त्रिभूज आकारको –नेपाली झण्डा । र घन्किदै थियो नेपाली –राष्ट्रिय गान । हो, त्यहि बेला हामी नेपाली जातिको छाती गर्वले ढक्क फुलेको थियो । उता बगालादेशको चिटागोङ्मा डेडदर्जन नेपाली क्रिकेटरहरुले बिपक्षीका बल सुइकाउँदै गर्दा यता संसारभरका हाम्रा नेपाली मनहरु खुसीले 'चौका' र 'छक्का' बनेर उडीरहे । हामी हाम्रा खेलाडीहरुको मनोबल उँचो बनाउँदै ढाल बनेर छेकी रह्यौं–बिपक्षीका प्रहारहरु । म अड्कल काट्थे –यत्तिबेला विश्व जीब्रो टोक्दैछ ।
हो, इतिहास जित्नेहरुकै हो । हामीले पनि रच्यो इतिहास । र लेख्यौं ।
बिदेशीभूमीमा नेपाली धुन बजेको बेला । नेपाली झण्डा फर्फरहाई रहेको बेला । अनि हामीले जीतेको त्यो बेला । देशप्रतिको गौरव भनिसाध्य छैन । गर्विलो छाती पहाड बनेर उभिँदा होचो लाग्दो रैछ त्यो संसारको छानो चोमोलोङ्मा (सगरमाथा) पनि । आम्मै कत्ति अग्लिए होलान्– पारसका आमाहरु । लौन कस्तरी पो हौसिए होलान् -ज्ञानेन्द्रका बाबुहरु ? उता गर्वले छाती पिट्ने शक्ति जस्तैका श्रीमतीहरु त कति कति ? हो त । यसपाली हामी सप्पै–सप्पै एकैसाथ उचालियौं । एक्कै साथ अग्लियौं । र त लेख्यौं हाम्रो इतिहास हामी आफैले ।
अब हामी यो इतिहास र एकता सधैंका लागि कायम गरौं न । हाम्रा खेलाडीहरुले देशको लागि जसरी बलिङ्ग र ब्याटिङ्ग गरे, हामी पनि हाम्रा साझा दुश्मन्का टाउकै टाउकाहरुको गिर खेलौन । हामी पनि एकताको ब्याट समातेर सिमानापारी फ्याँकी दिउ–देशका शत्रुहरु । हाम्रा बीर पूर्वजहरुको शक्ति लिएर सप्पै देशद्रोहीहरुलाई अल आउट गरौं न ।
नेपाली क्रिकेट टोलीका नायकहरु हिजै मात्र स्वोदेश फर्किए । उनीहरुले संसारलाई बाँढेर आएकाछन् हामी, हाम्रो र देशकै परिचय । देशको माटो टेक्दै गर्दा उनीहरुलाई भव्य एवं सभ्य स्वागत र सम्मान गरियो । जसका लायक उनै थिए । कुनै राजा–महाराजा, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा अन्य कुनै ठुलाठालुको बनावटी सत्कार भन्दा लाख बढि थियो त्यो स्वतःस्फुर्त स्वागत र सम्मान । ओहो कत्ति सुहाएको तिनका गलामा फुलका मालाहरु ? कस्तरी खुलेको तिनकै निधारमा अविर रङ् ?
पोहोर नै त हो पचासौं धार्नीको फुलमालाले थिचेको घिन लाग्दो अनुहार टुलुटुल हेर्ने हामीहरु... ।
सबै नियतकै त कुरा रैछ ।
'तँ बाँचिस भने खीर खालास्' भन्ने शर्तमा होइन 'खाएर बाँच'को नियतमा राज्यले काम गर्नु पर्यो । यसअघि खेलकुद मन्त्रीले यहि आशयमा भने–“तँ बाँचिस भने खीर खालास् ।” अब सशर्तमा होइन, निशर्त यस्ता खेलाडीहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनु पर्छ । र भन्नु पर्छ–“खाएर बाँच ।” अन्यथा बासी चना र भिजेको केराउका भरमा परिणाम उल्टो आउँदा र्याल काँढ्नु सिवाय विकल्प छैन । किर्तिपुरको गौचरणमा कहिले हिलो सुक्छ ? चक, डस्टर र मार्कर छोडेर कहिले ठडिन्छ डिजिटल स्कोर बोर्ड ?
यहि जिज्ञाशासँगै यसपाली पनि यत्ति
तस्बिर : नागरिक न्यूज
न्युयोर्क/ मार्च २१, २०१४
शुक्रवार, २०७० चैत्र ०७ गते २१:३० / Friday, Mar 21, 2014 9:30 pm